Hirdanka diblomaasiyadeed ee dalalka Geeska Afrika | Berberanews.com
Home WARARKA Hirdanka diblomaasiyadeed ee dalalka Geeska Afrika
Hirdanka diblomaasiyadeed ee dalalka Geeska Afrika
Madaxweynaha Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Mohmed Cabdullahi Farmaajo ayaa manta gaaray dalka Itoobiya, isagoo halkaasi kaga qayb galaya kulan looga hadalyo arimaha geeska Afrika iyo iskaashiga kala dhexeeya waddamada Safka hore ee Ood-wadaagta la ah Soomaaliya.
Dalalka gobolka uu u muuqda inuu hirdan diblomaasiyadeed ka dhaxeeyo ayaa yeeshay kulamo wajiyo kala duwan leh oo ay bahwadaag kala duwan ku sameysanayaan.
Kulamadaasi ay yeesheen wadamada Safka hore oo ahaa kuwo loogu duur xulayo, iskaashiyo leh u jeedooyin dhawr ah, ayaa qaar kood waxa ay hagoogan yahiin arimo ganacsi.
War qoraal ah oo lasoo dhigay bogga rasmiga ah ee Raysal wasaaraha Itoobiya ku leeyahay Twitterka waxaa lagu sheegay in Farmaajo iyo Abiy ka wada hadleen xoojinta iskaashiga amni iyo nabadgelyo ee dalalka Geeska Afrika, xoojinta xidhiidhka Soomaaliya iyo Kenya, iyo sii wadida heshiisyada labada Gees ee horumarinta dekedaha, iyo xiriirka Soomaaliya iyo Somaliland.
Wasiir dowlaha arrimaha dibada ee Soomaaliya Cabdiqaadir Axmed Khayr Cabdi ayaa u xaqiijiyay BBC in madaxda Soomaaliya iyo Itoobiya ka wada hadleen xiisada ka dhalatay muranka badda ee Muqdisho iyo Nayroobi. Laakiin wasiirka oo ka mid ah weftiga madaxweynaha waxa uu intaa ku daray in muranka badda uu yahay waxa mugdiga geliyay xiriirka Soomaaliya iyo Kiinya. Wuxuu sheegay in mowqifka Soomaaliya ee la xiriira dacwada badda uusan waxba iska bedelin islamarkaasna aysan ka noqon doonin dacwada hor taal maxkamada caalamiga ah ee ICJ.
”Raysulwasare Abiy Axmed iyo Madaxweyne Farmaajo waxay sidoo kale ay isla soo hadal qaadeen arinta u dhaxeeysa Kenya iyo Soomaaliya”, ayuu yidhi wasiiru dowlaha.
Isagoo sharraxaad ka bixinaya qodobkan ayuu yidhi: “labada dal waxay isku hayaan arinta Badda, Soomaaliyana mooqifkeedu waa mid cad, oo aan laheyn wax gabasho ah oo aanay ku jirin mugdi, wixii shariga horyaalana waa sida loo hor dhigay go’aankana waxaa laga sugayaa Maxkamadda Caalamiga ah. balse wixii kale ee siyaasad ah ama diblomaasiyad ah ama ganacsi ah ama daris wanaag ah ama isu socod ah waxaan diyaar u nahay inaan si fiican ku xalino”, sidaas waxaa yidhi Wasiiru dowlada Arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Dhaqdhaqaayada ka biloowday geeska ayaa waxaa la sheegayaa inay wax yaalo dhowr ah huwan yahiin, iyadoo dallka gobolka ay dhowr magaalo ku kulmeen, si ay iskaashigooda u xoojiyaan.
Hadaba waxyaabaha ku gedaaman arrintan ayaa wax ka weydiinay Faysal Cabdi Roble oo ah aqoonyahan falanqeeya siyaasadda Geeska Afrika, sigaarana ugu takhakhusay arimaha Itoobiya.
“Soomaaliya wax faa’iido ah uguma jiraan arrimahan, sababtoo ah Soomaaliya waa dal kheyraad kala duwan leh, Itoobiyana waxay dooneysaa iney ka faa’iideysato oo ay maashusho kheyraadkaas, halka Soomaaliya aysan waxba ka heleyn Itoobiya dhankeeda”, ayuu yidhi Faysal.
Previous articleXisbiga KULMIYE oo kulan la Qaatay Wefti Ka Socda Midowga Yurub
Next articleMuuqaal-Gudoomiyaha Gobolka Sool Oo Markii ugu Horeysay Gaadiid Iyo Dhukumenti Ka Furtay Maamulka Puntland